Lace Checks အနီရောင် Plaid မိန်းကလေး ၀ တ်နှင့်ကိုယ် ၀ တ်အ ၀ တ်အစား - အခမဲ့ပို့ဆောင်ခြင်းနှင့်အကောက်ခွန်မရှိပါ WoopShop®
ဇာစစ်ဆေးသည်အနီရောင် Plaid Girls Bodysuit & Mini Dress
$11.99 ပုံမှန်စျေးနှုန်း $14.99
အရောင် Bodymit6မှ 12 မီတာ Bodymit 12 မှ 18 မီတာ Bodymit 18 မှ 24 မီတာ 1 မှ 2T သို့ ၀ တ်ဆင်ပါ2မှ 3T သို့ ၀ တ်ဆင်ပါ3မှ 4T သို့ ၀ တ်ဆင်ပါ4မှ 5T သို့ ၀ တ်ဆင်ပါ5မှ 6T သို့ ၀ တ်ဆင်ပါ Bodymit0မှ6မီတာ
Bodymit6မှ 12 မီတာ Bodymit 12 မှ 18 မီတာ Bodymit 18 မှ 24 မီတာ 1 မှ 2T သို့ ၀ တ်ဆင်ပါ2မှ 3T သို့ ၀ တ်ဆင်ပါ3မှ 4T သို့ ၀ တ်ဆင်ပါ4မှ 5T သို့ ၀ တ်ဆင်ပါ5မှ 6T သို့ ၀ တ်ဆင်ပါ Bodymit0မှ6မီတာ
ဇာ Checks အနီရောင် Plaid မိန်းကလေးကိုယ်ထည်နှင့်အဝတ်အစားအသေး - Bodyusit6မှ 12M backordered နှင့်အဖြစ်မကြာမီကြောင့်ပြန်စတော့ရှယ်ယာဖြစ်သကဲ့သို့တင်ပို့ပါလိမ့်မယ်။
နာမည်: ကလေးသူငယ်များကိုယ်ထည်အ ၀ တ်အစား
ပုံစံ: Lolita စတိုင်
Romper အရွယ်အစား အရှည် တွေဆီကနေ *2အသက်အရွယ်
70 40 စင်တီမီတာ 25.5 စင်တီမီတာ 0-6 လ
80 42.5 စင်တီမီတာ 27 စင်တီမီတာ 6-12 လ
90 45 စင်တီမီတာ 28.5 စင်တီမီတာ 12-18 လ
100 47.5 စင်တီမီတာ 30 စင်တီမီတာ 18-24 လ
အရွယ်အစားဂါ ၀ န် အရှည် တွေဆီကနေ *2အသက်အရွယ်
90 50 စင်တီမီတာ 28 စင်တီမီတာ 1-2 နှစ်များ
100 53 စင်တီမီတာ 29.5 စင်တီမီတာ 2-3 နှစ်များ
110 56 စင်တီမီတာ 31 စင်တီမီတာ 3-4 နှစ်များ
120 59.5 စင်တီမီတာ 32.5 စင်တီမီတာ 4-5 နှစ်များ
130 62.5 စင်တီမီတာ 34 စင်တီမီတာ 5-6 နှစ်များ
တစ်ချိန်တည်းမှာပင်မေလသည်ရိုမာперအနည်းငယ်ခိုးဝှက်သွားသည် - မသေချာမရေရာသေးပါ၊
Precioso, per se pequeño para ser talla4el vestido
Отличныеплатья! Какнафото! Рекомендую, доставкаоченьбыстрая